ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Black က Panther"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်ယနေ့အထိသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မေတ္တာဘဝ, မိသားစုဘဝနှင့်အနည်းငယ်သာသူ့ကိုအကြောင်းကိုလူသိများအများအပြား OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်း 2014 ကမ္ဘာ့ဖလား၌မိမိအပေါ်-စေးနည်းဗျူဟာထောက်လှမ်းရေးအကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သော်တစ်ခုသာလက်အနည်းငယ်ပရိသတ်တွေအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောယောလကမ့်ဘဲလ်ရဲ့ဇီဝအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
ယောလက Nathaniel ကမ့်ဘဲလ်မြူသူ၏မိခင်, Roxana မြူနှင့် San ဟိုဆေး, ကော့စတာရီအတွက်ဖခင် Humberto ကမ့်ဘဲလ်ရန်, ဇွန်လ 26 ၏ 1992th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
Humberto ကမ့်ဘဲလ်နှင့် Roxana မြူသူတို့ရဲ့လေးယောက်သားစဉ်မြေးဆက် (ယောလ) ၏တတိယ procreated အခါ, ဘောလုံး၏မျိုးဗီဇတဦးတည်းရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, Doña Roxana များ၏အူအတွင်းလျက်ခေတ္တ။ သူတို့ရဲ့ခစျြသား, ယောလကမ့်ဘဲလ်သူမ၏မိသားစုဘောလုံးကတိကဝတ်များ၏ 4th မျိုးဆက်ကိုကိုယ်စားပြုသူအ Roxana မြူ၏မိသားစုမှတစ်ဦးပဉ္စမမျိုးဆက်ဘောလုံးသမားအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Roxana မြူ (ယောလကမ့်ဘဲလ်ရဲ့မိခင်) ဘောလုံးသူမ၏သား၏ DNA တွင်သည်အဘယ်ကြောင့်မူလတန်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျောကာလ၌, သူမကိုခေါ်ခဲ့သည် Pelela, allusion အတွက်, သင်တန်း, ဒဏ္ဍာရီဘရာဇီးမှ Edson Arantes Do Nascimento, Pelé။ သူမသည်နဲ့တူဂိုးအများကြီးသွင်းယူ Pele သူမ၏အချိန်ကာလအတွင်း။
Roxana, တစ်ချိန်ကယောလသည်မိမိသားပိုင်ခွင့်ကိုသူသေချာစွာကန်ရာသူမ၏ဝမ်းထဲကဘောလုံးကွင်းထဲမှာပညာတတ်ခဲ့ကွောငျးအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်နောက်ထပ်သူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစကားများ babble မတတျနိုငျပင်အခါ, ယောလပြီးသားတစ်ဦးဘောလုံးအပေါ်တစ်ဦးအခိုငျအမာချုပ်ကိုင်ပြုံးနဲ့ကိုတင်ကိုဘယ်လိုသိမွေးဖွားအပေါ်သို့ကပြောသည်။ အဆက်မပြတ်ပြုံးရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုယောလနှင့်သူ၏ညီအစ်ကို, အငယ်တန်း Humberto, ကက်သရင်းနှင့် Nekisha နှစ်ဦးစလုံး, ဒွန် Humberto, ၎င်းတို့၏အဘ၏လက်မှအမွေဆက်ခံမယ့်သီလဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးမိဘများဘုရားကိုကိုးကွယ်သောခရစ်ယာန်တွေကဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကြီးပြင်းလာ။ ကမ့်ဘဲလ်သည်သူ၏မောင်နှမ (အထကျဖျောပွထားသညျ့အမညျမြား) ၏သုံးခုနှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။
ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေးအကျဉ်းချုပ်
တစ်ဦးဘောလုံးမိသားစုမှာသားအဖြစ်, ဘောလုံးကိုအမြဲကသူ၏ DNA ကို၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကနေယောလနှစ်ခုဘောလုံးခဲ့ထိုကဲ့သို့သောအဖျားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအခြားတဦးတည်းမျက်နှာကျက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဘောလုံးကိုပြန်လာဖို့ငြင်းဆန်မညျ့သူအချို့မသက်မသာအိမ်နီးချင်း၏ဥယျာဉ်တော်သို့ပျံသန်းမယ့်အမှု၌စောင့်နေတဲ့အားလပ်ချိန်မှာဘောလုံးကိုရှိခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်ယောလကမ့်ဘဲလ်လေးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
သူကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်စဉ်ကမ့်ဘဲလ်ရဲ့ဘောလုံး Gene အစောပိုင်းထင်ရှား။ Humberto, မိမိအဘထိုကဲ့သို့သောစည်းကမ်းနှင့်အပျနှံအဖြစ်ဘောလုံးကွင်းတန်ဖိုးများကိုသင်ယူဖို့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာကမ့်ဘဲလ်ထိုသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျောင်းကိုသွားမိဘသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေဘေးဖယ်, သူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းရှိခြင်းအတွက်ကမ့်ဘဲလ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသည်, မိမိ ကျောင်းစာအုပ်သူ့ကိုတပ်မက်အားကစားကာလအတွင်းမှာအပြိုင်အဆိုင်ဘောလုံးကစားရန်အခွင့်အလမ်းပူဇော်ကြ၏။ ဒီအယူဟာသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ refueled ''ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ'' အလေးအနက်ထားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဖလားယခုအချိန်တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်။
ယောလသည်သူ၏အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာနှင့်သူ၏ရည်မှန်းချက့်သွားတာဖန်စီမအောင်တဲ့ steely ပြဌာန်းခွင့်ပိုင်တော်မူ၏။ ကမ့်ဘဲလ် Saprissa "အမည်ရှိကော်စတာကန်ပြည်တွင်းကလပ်မှာထွက်စတင်Cဗလင်စီယာ၏ arajillos"စန်းရာဖေးလ် Abajo က de Desamparados ၌တည်၏။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသည်သူ၏လူငယ်ကစားသမားဘစဉ်အတွင်းသူ့ကိုဖူးသောနည်းပြကသူ့ပြိုင်ဘက်အပေါ်ကိုယူမယ့်ကြီးမြတ်စွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဦးအစာရှောင်တိုက်ခိုက်သူအဖြစ်သူ့ကိုသတ်မှတ်။ ထို့အပြင်သူသည်အလွန်ကောင်းသော dribbling ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးအကောင်းတစ်ဦးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယောလကမ့်ဘဲလ်ဟာရင့်ကျက်ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်သူ၏လူငယ်ဘောလုံးပြီးဆုံး။
တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းလှည့်လည်အာဆင်နယ်ကင်းထောက်သူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရှေ့တော်၌မိမိလူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီးသွားချိန်ယောလနှစ်ခုသာအကြီးတန်းပွဲလုပ်လေ၏။ သူကစွပ်စွဲအာဆင်နယ်နှင့်အတူလက်မှတ်ထိုးရန်ဆီဗီလာနှင့် Fiorentina နှစ်ဦးစလုံးကဆင်းလှည့်။
2011 အတွက် Saprissa ထံမှဂန်းနားမှရွေ့လျားနေသော်လည်းအဆိုပါတိုက်စစ်မှူးသည်သူ၏ 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားစွမ်းဆောင်ရည်ပုံမှန်ကျေးဇူးတင်စကားတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအသင်းဖြစ်လာခြင်းမတိုင်မီငါးနှစ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ သူနေဆဲချေးငွေအပေါ်ကိုထပ်အာဆင်နယ်အသင်းထွက်ခွာနေသော်လည်းကလပ်၏စီးရီးများအတွက်ကစားဝမ်းမြောက်သောစိတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘောလုံးကမ့်ဘဲလ်ကသူပွညျ့စုံကိုတွေ့တဲ့အားကစားတစ်ခုရွှေသစ်ပင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ Righ, ယောလသည်သူ၏အံ့သြဖွယ် display ကိုကျေးဇူးတင်ပုံမှန် Costarican အနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ မိမိအစွမ်းရည်နဲ့အလားအလာအဖြစ်ကွင်းကိုချွတ်သည်သူ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့, အထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံတည်ဆောက်ကြလော့။ အမှန်တရားဖြစ်တယ်, ယောလကမ့်ဘဲလ်အလှတရားကိုချစ်ပြီးသူကယ့်ကိုမိမိနှလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးရတဲ့၌သူ၏အချိန်ကိုယူ။
ယောလတစ်ကြိမ်သည်မိမိ bestie ဖြစ်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူမာရီယာဖာနန် Cascante မတ်ေတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ bestie status ကိုကနေကြီးပြင်းလာတယ်။
သူကလှပသောဖာနန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ချက်ချင်းယောလကမ့်ဘဲလ်ကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, ထောက်ခံမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအကွံဉာဏျပေးတဲ့သူကသူ့မိဘတွေနဲ့အတူသူမ၏ကျွမ်းတယ်, ရှေ့တော်၌ဒါဟာအချိန်ကိုယူတာပါ။
ယောလကမ့်ဘဲလ် 8 နှစ်ပေါင်းဖာနန်ရက်စွဲပါနှင့်၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကောင်းသောနဲ့ Hard နှစ်ဦးစလုံးအချိန်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ရောနှောနေခြင်းမှမိမိတို့၏စွမ်းရည်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး၏ 8th တစ်နှစ်ကျင်းပပြီးနောက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကိုရောက်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဇွန်လ 2017 အပေါ် Iglesia က de Pozos, ကော့စတာရီမှာက de Santa Ana ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါမင်္ဂလာဆောင်ကဲ့သို့သူ၏ကိုစ်တာရီကန်အသင်းဖော်များကတက်ရောက်ခဲ့သည် Yeltsin Tejeda, Bryan Ruizနှင့် Keylor Navas။ ထင်ရှားအဖြစ်သူတစ်ချိန်ကအောက်ကပုံထဲမှာမိမိမယားကိုကိုယ်ဝန်ဆင်နွှဲရသောအခါယောလကမ့်ဘဲလ်ဟာအံ့သြစရာလက်ထပ်ဘဝကိုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ဖာနန်စုံတွဲ Brianna ကမ့်ဘဲလ်အမည်ရှိတော်မူသောအဆင်းလှသောကလေးကမိန်းကလေးဘွားမြင်လေ၏။ သူမသည်နေဆဲအရေးအသား၏အချက်မှာအဖြစ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်သာကလေးကရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအဖြစ်ယောလအလွန် Brianna ကမ့်ဘဲလ်ကသူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးတွဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်းလှသောဇနီးနှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိထားရှိခြင်းသည်ဧကန်အမှန်အ, အရှင်ဘုရားသခင်အားအလွန်နီးကပ်ဖြစ်လာ, ကမ့်ဘဲလ်ပိုကောင်းဘို့ပြောင်းလဲသွားတယ်စေသည်။ ယောလကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်နှင့်အတူ, မိမိအသက်တာ၌ဒုတိယမှတ်တိုင်အဖြစ်သူ၏ဇနီး, မိခင်နှင့်သမီးမြင်သည်။
Roxana မြူ, ယောလရဲ့အမေ, အသီးအသီးပွဲစဉ်မတိုင်မီသူမ၏သားဆာလံ 27 ဖတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ဒီအလေ့အကျင့်ကသူ၏ဇနီးနှင့်မိခင်နှစ်ဦးစလုံးထံမှထောက်ခံချက်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ့်ဘဲလ်သည်သူ၏ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ယုံကြည်ချက်ရရှိသွားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆာလံ 27 ပြောပါတယ်; အဆိုပါ သခင်ဘုရားသည် ငါ၏အလငျး, ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းတရားမူကား, ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်ရမည်နည်းဟူမူ သခင်ဘုရားသည်ငါ့အသက်ကိုများ၏အစွမ်းသတ္တိ, အဘယ်သူကိုငါမကြောက်ရကြမည်လော
2 ငါ့အသားကိုတက်စားရန်အကြှနျုပျအပျေါသို့ရောကျသောအခါမတရားသောသူသည်ပင်ငါ၏ရန်သူတို့ကိုအကြှနျုပျ၏ရရန်သူများ, လဲတတ်သောသူတို့သည်နှင့်လဲကျသွားသည်။
"ဟုအဆိုပါအနားယူ Get ဖို့ကမျြးစာသွားရောက်!"
ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
မိမိအမိဘများ: "Humberto ၏မိသားစုတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်", Doña Roxana အိမ်၏မိခင်ကဆိုသည်။ ဒါဟာသူ့ဇနီး (ယောလကမ့်ဘဲလ်ရဲ့မိခင်) အငြိမ်းစားဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာယခင်တစ်ဦးဘောလုံးဂိုးသမားကြီးသူ Humberto ယခု Seaman ကြောင်းသိရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမစ္စတာကမ်းဘဲလ်မိသားစုသူတို့ဘယ်သူ့ကိုမှသို့မဟုတ်ဘာမှမနာလိုစရာမလိုပေမယ့်သီအိုရီရှိပါတယ်။ "အတူတူပင်အခြေအနေများနှင့်အတူအားလုံး, တန်းတူဖြစ်ကြောင်း" သူ့သားရဲ့ဘောလုံးဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများကိုကြည့်ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံသူဖခင်ကပြောပါတယ်။
ယောလကမ့်ဘဲလ်ရဲ့မိခင်အကြောင်းကိုပိုမို: ယောလကမ့်ဘဲလ်ရဲ့အမေ, အဟောင်းဘောလုံးကွင်းကိုလည်းသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ချစ်ခြင်း၌လဲမပြုမီသူမ၏ခင်ပွန်းညွှန်ကြားထားသောအမျိုးသမီးအသင်းဖြစ်သည့်အတ္တလန္တိတ်၏အနီရောင်ကြယ်မှာသူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကစားခဲ့ပါတယ်။ Roxana နှင့်သူမ၏သားကမ့်ဘဲလ်နှစ်ဦးစလုံးဟာအလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုကသက်သေအထောက်အထားများကိုအောက်တွင်သူမ၏ကြေညာချက်ထဲမှာကိုဖန်ဆင်းသည်။
Dona Roxana တစ်ချိန်ကဤဝန်ခံ: သူကတစ်ဦးကလေးတုန်းက "ကျွန်မနေတဲ့ခေါင်းအုံးပေါ်မှာအမြဲယောလ breastfed ။ ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်, ယောလနေဆဲသူ့ကိုရန်နီးစပ်ကြောင်းခေါင်းအုံးရှိပါတယ်။ သူသွားလေရာရာ၌သူတစ်ဦးနှစျလိုဖှယျအရာဝတ္ထုနဲ့တူပါကကြာပါတယ်။ တူညီတဲ့ခေါင်းအုံး! "
မောင်နှမ: "သူကသူ့ရဲ့အားကစားအောင်မြင်မှုများရှိသော်လည်းအပြန်အလှန်နှင့်သူ၏မောင်နှမနီးကပ်နေဖို့ရန်သူ၏စွမ်းရည်များအတွက်သာလူသိများနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်" မိုက်ကယ်ကသူ့ဝမ်းကွဲကဆိုသည်။ ယောလကမ့်ဘဲလ်ကသူလည်းသူ့ကိုမနာလိုတဲ့သူကသူ့ဆွေမျိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပဋိပက္ခရှောင်ရှားရန်အမြန်ဖြစ်ပါတယ်နည်းတူအခြားသူများကိုကူညီအမြန်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်
ကမ့်ဘဲလ်ကိုငါတို့သညျအရာရှိတဦးက Instagram ကိုမှတဆင့်သိနိုငျသောအလွန်ဇိမ်ခံဘဝနေထိုင်ပါတယ်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်နားကြပ်ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်။
မိမိအစပ်လျဉ်းအဖြစ် အားသာချက်, ကမ့်ဘဲလ်ဖြစ်ပါသည် မြင့်မား, စိတ်ကူးယဉ်သစ္စာစောင့်သိ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အလွန်စာနာ, Tenacious ။
မိမိအစပ်လျဉ်းအဖြစ် ဝါသနာ, ကမ့်ဘဲလ်ကိုချစ်သောသူ အနုပညာ, အိမ်မှာ-based ဝါသနာ, ချစ်ရသူ (အထူးသဖြင့်မိဘများနှင့်မောင်နှမ) ကူညီပေးနေ, ရေအနီးရှိသို့မဟုတ်လျှော့ပေါ့နှင့်အိမ်မှာကသူ့ဒက်စ်တော့နဲ့သူ့ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာအချိန်ဆက်ကပ်အပ်နှံ။ မီဒီယာအစီရင်ခံစာများသူတစ်ဦးတက္ကသိုလ်အွန်လိုင်းအစီအစဉ်တွင်အနည်းဆုံးကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Wierd အချက်အလက်
ကမ့်ဘဲလ်ဟာဇာတ်ကောင်တစ်နည်းနည်းကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာတစ်ချိန်ကနာမည်ကြီးသူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိရန်ဘောလုံးကွင်းစတစ်ကာများ၏ 100 packets တွေကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူမဟုတ်ခဲ့တယျ။
သူကသူ့ဝမ်းကွဲမှသတင်းပို့ဖို့လမ်းအဖြစ်တစ်ဦးနှုတ်ဆက်နဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအတိုင်းဤတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦး wierd အခမ်းအနားအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောလကမ့်ဘဲလ်ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
Alisson Becker ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်